सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि कम्पनी दर्ता प्रक्रिया | गृहपृष्ठ
Home यातायात सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि कम्पनी दर्ता प्रक्रिया
on: May 22, 2018 यातायात
सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि कम्पनी दर्ता प्रक्रिया
कम्पनीमा दर्ता गराएर मात्रै सवारीसाधन सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले हालै उक्त निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । अब पञ्जीकृत सार्वजनिक सवारीसाधनले मात्रै रूट इजाजत पाउनेछन् । विभागका अनुसार रूट इजाजत र नवीकरणका लागि पञ्जीकृत गर्न अनिवार्य गरिएको छ । पञ्जीकरणका लागि पहिले कम्पनीमा दर्ता हुनैपर्छ र मात्रै पञ्जीकरण गर्न सकिन्छ ।
कम्पनी दर्ता कसरी हुन्छ ?
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमार्फत कम्पनी दर्ता गर्नुपर्छ ।
अहिले अनलाइनबाटै कम्पनी दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
अनलाइन दर्ता गर्न सबैभन्दा पहिले कम्पनी रजिष्ट्रारको वेबसाइट धधध।यअच।नयख।लउ मा ‘अनलाइन कम्पनी सर्च’ नामक अप्शन छ । त्यहाँ गएर आफूले राख्न चाहेको नाम लेखेर सर्च गर्नुपर्दछ ।
तपाईंले राख्न चाहेको कम्पनीको नाम अरू कसैले राखेको छ वा छैन त्यसमा देखाउँछ । यदि राखेको छ भने पाइँदैन र नयाँ नाम जुराउनुपर्छ ।
त्यसपछि एउटा ईमेल अकाउण्ट बनाउनुपर्छ । सोही वेबसाइटको ‘रिजर्भ कम्पनी नेम’ अप्शनमा जानुपर्छ । त्यहाँ ‘टु स्टाब्लिश अ न्यू कम्पनी’मा गएर फर्म भर्नुपर्छ ।
त्यहाँ युजर नेमसमेत राखेर फर्म भरेपछि पासवर्ड प्राप्त हुन्छ । त्यसपछि सोही युजर नेम र पासवर्ड राखेर लग इन गर्नुपर्छ ।
वेबसाइटले दिएको पासवर्ड चेञ्ज गरी पुनः लगइन गर्नुपर्छ । त्यसपछि तपाईंले राखेको नाम स्वीकृत भएको जानकारी आउँछ । केही नमिले त्यसको जानकारी पनि आउँछ ।
त्यसपछि प्रबन्धपत्र र नियमावली बनाएर सोही अकाउण्टमार्फत अपलोड गर्नुपर्छ । प्रबन्धपत्रमा कति जना सञ्चालक रहनेलगायत विवरण तथा नियमावलीमा के के गर्न पाउनेलगायत उल्लेख गरिएको हुन्छ । त्यसमा सञ्चालकले हस्ताक्षर गर्नुपर्छ ।
त्यसपछि प्रबन्धपत्र र नियमावलीको दुई प्रति लिएर कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा स्वयम् जानुपर्छ ।
साथमा सबै सञ्चालकको नागरिकताको फोटोकपीसमेत लिएर जानुपर्छ । त्यसपछि कम्पनी दर्ता हुन्छ ।
कति रकम कारोबार गर्ने कम्पनी दर्ता गर्ने हो, सोहीअनुसारको राजस्व बुझाउनुपर्छ । १ करोडको कम्पनी दर्ता गर्दा १६ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । सोभन्दा माथि प्रत्येक १ करोडमा ३ हजार बढ्दै जान्छ ।
कम्पनी रजिष्ट्रार कम्पनीमार्फत कम्पनी दर्ता गरेपछि यातायात व्यवस्था विभागमा गएर पञ्जीकरण गर्न सकिन्छ ।
कसरी गर्ने पञ्जीकरण ?
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ९३ ले सार्वजनिक यातायात पञ्जीकरण गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागमार्फत सार्वजनिक सवारीसाधनको पञ्जीकरण गर्न सकिन्छ ।
यातायात सेवा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र
यातायात सेवाको प्रबन्धपत्र र नियमावली
यातायात सेवाअन्तर्गत रहेको सवारी दर्ताको प्रमाणपत्र, सवारी कर तिरेको निस्सा, जाँचपास, तेस्रो पक्ष बीमा र आयकर दर्ता प्रमाणपत्र
यातायात सेवा यसअघि अन्य कुनै नामबाट सञ्चालन भएको भए त्यसको दर्ता प्रमाणपत्र, आयकर प्रमाणपत्र र कर बुझाएको प्रमाण
सेवा पञ्जीकृत गर्ने यातायात सेवा सञ्चालकहरूको नाममा रहेको कम्तीमा पाँचओटा सवारीसाधन हुनुपर्नेछ (पछिल्लो व्यवस्थाअनुसार एउटा मात्र सवारी पनि कम्पनीमा दर्ता गर्न सकिने उल्लेख छ) । अन्य व्यक्ति वा संस्थाको नाममा रहेका सवारीसाधनको भाडाको सम्झौता वा करारनामा गरिएका सवारीसाधन भएको अवस्थामा पञ्जीकृत हुनेछैन ।
सेवा पञ्जीकृत गर्दा तोकिएबमोजिमको राजस्व दस्तुर बुझाएको रसिद पेश गर्नुपर्छ । एकपटक सेवा पञ्जीकृत भइसकेको कम्पनीमा थप सवारी पञ्जीकृत गर्दा लाग्ने शुल्क पुनः बुझाउनुपर्नेछ ।
कार्यालय रहेको घरजग्गाको लालपुर्जा वा भाडामा लिएको भए सोको सम्झौतासमेत पेश गर्नुपर्छ ।